Keyword Kutsvaga Kunofanira Kupindura Iyi Mibvunzo Martech Zone
Muvhuro, Nyamavhuvhu 13, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Takatarisa makambani mazhinji achiita zvavanodaidza keyword research uye ndinoshamiswa neruzivo rwakawanda rwavanosuwa pavanenge vachipa mazano kumakambani kuti ndeapi mazwi akakosha avanonongedzera nemaitiro avo ekutengesa zvemukati. Iyi mimwe mibvunzo yakakosha yatinopindura
Ndeapi mazwi akakosha anotyaira shanduko? Kana iwe usingazive, ini ndinokurudzira leveraging analytics zvakanaka uye nekuzivisa kuitira kuti iwe ugone kuziva mazwi akakosha anotyaira bhizinesi… kwete traffic. A kukanganisa kukuru isu tinoona nemakambani mazhinji kutarisisa pamazwi akakosha anotyaira traffic kwete mazwi akakosha anotyaira bhizinesi. Kuwana chinzvimbo chepamutemo kunotora nguva - ita shuwa kuti uri kushandisa izvo zviwanikwa zvine hungwaru nekumira pane vashanyi vanotenga Vanopa mazano kazhinji vanongowana mazwi akakosha ane mavhoriyamu makuru ekutsvaga. Kunze kwekunge iwe uri kutengesa kushambadza pane yako saiti, iwe unoda zvinopfuura kushanya - iwe unoda bhizinesi
Ndeapi mazwi akakosha iwe aunotarisa parizvino? Nekuti makambani anopedza nguva yakawandisa vachiongorora traffic, vanogara vachipotsa iwo mazwi akakosha iwo asingaite mushe asi inogona kuva. Kuziva mazwi akakosha uye mapeji awakavigwa mumatanho eiyo ndiwo mukana wekutanga tweak iwo mapeji uye uwane chinzvimbo chiri nani ne. Isu tinoshandisa Semrush kutsvaga mapeji uye mazwi akakosha atinoisa pamusoro. Isu tobva taenda kunonatsiridza iwo mapeji uye kazhinji tinowana yakanaka bump mune chinzvimbo uye traffic.
Ndeapi epakati misoro ako mazwi akakosha anogona kuve akaiswa mukati? Mapeji pane yako saiti anogona kuverengera kune akawanda emazwi akakosha musanganiswa. Izvo zvakakosha kuti uzvinzwisise iwo misoro yakakosha mazwi ako akakosha anogona kuwiriraniswa nemusangano webhusaiti yako uye kuenderana. Ino yako saiti hierarchy inoenderana neyako kiyi hierarchy? Kana zvisiri, panogona kuve nemikana yekuvaka mapeji uye zvikamu zvesaiti zvinotarisa kune organic organic traffic. Isu tinogara tichikurudzira mashoma mashoma emapeji ekumhara anotarisa pazita rakakosha pane chigadzirwa kana sevhisi yekambani. Iwo mapeji anotyaira chinzvimbo, traffic, uye shanduko. WordStream ine kiyi yekushandisa iko kwaunogona kunama zviuru gumi zvemazwi mukati mayo uye inozozvimisikidza ivo.
Ndeapi mazwi akakosha aunofanirwa kukwikwidza? Nguva zhinji, makwikwi ako ari kuwana traffic iwe yaunogona kunge uri… dai iwe waingonzwisisa chete zvavakange vari pachinzvimbo chausiri iwe. Zvakare, mazhinji mazwi akakosha anogona kunge asingakwanise kuwana chinzvimbo chakanaka pa. Sei uchikwikwidza nemazwi akakosha iwe usiri kuzokunda? Zvakare, Semrush chave chiri chisarudzo chedu chekushandisa cheizvi. Tinogona kutarisa makwikwi ekukwikwidza tobva tadzokorora mazwi akakosha renji redu remakwikwi kuti tione kana isu tine zvipenga mune yedu yemukati zano.
Ndeapi mazwi akakosha iwe aunogona kuburitsa zvemukati pane izvo zvinoguma nematanho uye traffic? Zvakanaka kuburitsa rondedzero yetoni yemazwi akakosha uye zvakafanana mitsara… asi zvirevo zvipi zvaunganyora mablog mablog, mapeji anomhara, infographics, whitepapers, ebook, mharidzo uye mavhidhiyo pane nhasi izvo zvaizoguma nemhedzisiro mhedzisiro? Hatitende kuti kutsvagisa kwemazwi akakosha chaizvo kunze kwekunge iwe uchipa zvemukati zvinokurudzirwa pamwe nekuwongorora. Kutsvaga-refu muswe (yakaderera vhoriyamu, inonyanya kukoshesa) mazwi akakosha ave nyore kushandisa WordStream.
Nenzira, kana usati waona iyo ichangovandudzwa mushandisi interface kubva Semrush, hazvishamise:
Tinowanzo shandisa Semrush yekupedzisa kuongorora uye WordStream yekuwana longtail kuwanikwa uye kiyi yekuisa mazita. Kuzivisa: Iyo Semrush batanidzo mune ino positi ndeyedu yakabatana link.
Tags: gurukeyword researchmazwi akadzamalongtail keywordssemrushizwi reshoko